Iindaba -Ulonwabo loyilo lwempahla yoyilo
Ukwakhiwa kwakhona kwamalaphu kunokuthiwa kuyilo lwesibini lwelaphu lempahla. Ibhekisa kuqhubekeko lwesibini lwamalaphu agqityiweyo ngokweemfuno zoyilo zokuvelisa iziphumo zobugcisa. Kukongezwa kwengcinga yoyilo kwaye kunendlela entsha engenakuthelekiswa nanto. Kwenza ukuba umyili womsebenzi ahluke ngakumbi.
Iindlela zokwakhiwa kwelaphu kwakhona
Ezona ndlela zisetyenziswa ngokuxhaphakileyo zezi: ukwaluka, ukufaka iipali, ukubongoza, ukudibanisa kunye nokuhambisa, ukuhombisa, ukuprinta imisonto, njl., Uninzi lwazo zisetyenziselwa uyilo lwasekhaya lweempahla ukubonisa ezi ndlela, kodwa nelaphu lonke.
Ukuluka okuyilayo, ngemeko eyahlukeneyo yentsontelo, intambo, umtya, iribhoni, umtya wokuhombisa, ikhonkco okanye iindlela zokunitha, zidityaniswe kwimisebenzi eyahlukeneyo yokuyila, zenza i-convex kunye ne-concave, i-crisscross, eqhubekayo, eyahlukileyo
Ukuxinana, ukugqobhoza imibala eyahlukeneyo kunye noburhabaxa.
Eyaziwa nangokuthi kukucenga, ukucenga kunokunciphisa okanye ukunciphisa indawo ende kunye nebanzi yengubo yengubo, isenza isambatho sibe sihle ngakumbi kwaye sihle. Ngeli xesha, inokunika umdlalo kwi-drape kunye neempawu ezintle zelaphu, ezinganeli nje ukwenza ingubo ikhululeke kwaye ilingane, kodwa ikwonyusa isiphumo sokuhombisa.
Ngenxa yokuba ineziphumo zombini ezisebenzayo kunye nezokuhombisa, isetyenziswe ngokubanzi kwizambatho ezikhululekileyo nezingavumelekanga zabasetyhini, ezenza iimpahla zibe nentsingiselo kwaye zibe nobomi.
U-Hollowing, kubandakanya umngxunya, umngxunya wokukrola, umgca wepleyiti e-hollowing, ityala lokukrola, njl
Kuyilo lwefashoni, isitayile, ilaphu kunye netekhnoloji zizinto ezibalulekileyo, kwaye uyilo lwesibini lwendwangu ludlala indima ebalulekileyo. Isiqwenga selaphu elungileyo emzimbeni, imilo engahleliyo yifashoni elungileyo. Ilaphu emva koyilo lwesibini luhambelana ngakumbi nombono womyili, kuba sele igqibile isiqingatha somsebenzi woyilo lwesinxibo, kwaye iya kuzisa ukhuthazo ngakumbi kunye nomnqweno wokuyila kumyili.